शिवमाया नेपालको इतिहासमै शक्तिशाली महिला नेतृत्व -
शिवमाया नेपालको इतिहासमै शक्तिशाली महिला नेतृत्व
काठमाडौं। माननीय शिबमाया तुम्बाहाङ्फेमा वास्तममा नै कुनै कमी रहेनछ तर उनलाई सभामुख बनाउन नेकपाको जत्थालाई गाह्रो परिरहेको छ । तर तुम्बाहाङ्फेले नेकपाको नेतृत्व तहले दिएको द’वावलाई गलह त्याएर राजिनामा दिन ईन्कार गरेपछि उप-सभामुखको चौतर्फी चर्चा भएको छ ।
हुनपनि हो, अहिलेसम्म कै उच्चतहमा काम गर्ने महिलाहरु मध्यकै सबैभन्दा क्षमतावान् देखिनुभएको छ उप-सभामुख तुम्बाहाङ्फे । औपचारिक शिक्षामा विद्यावारिधी हाँसिल गरेको, का’नूनको विद्यार्थी, चार दशकभन्दा बढी समयदेखि राजनीतिमा सकृय भएको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन पार्टीले आनाकानी गर्नू दुःखद् कुरा भएको बुझिन्छ ।
महिला आ’न्दोलन कै विषयमा विद्यावारिधी गरेकै मान्छेलाई अहिले महिला भएकै कारण उक्त पदमा लैजान नेतृत्व किन अनकन गरेको छ अचम्मको विषय बनेको छ ।
सभामुखको पदमा कति राजनीति र छ’लक’पट हुनेगरेको रहेछ भन्ने अहिले आएर जनताले बुझ्न थालेका छन् । पूर्व सभामुख ओन्सारी घर्तीमगर र वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई हेर्ने हो भने कसैले पनि डा. तुम्बाहाङ्फेलाई असक्षम भन्न मिल्ने अवस्था छैन । तर नेपालको घि’नलाग्दो राजनीति दैव जानुन् ।
नेकपा भित्र नै दुईवटा खोला बगेको छ एउटा खोलाले एमालेको पानी बोक्छ अर्को खोलाले माओवादीको । यदि शिबमाया तुम्बाहाङ्फेको अडान कायम रहने हो भने तुम्बाहाङ्फे नेपालको इतिहासमै क’डा महिला हुने निश्चित छ ।
कम्युनिष्ट भित्र प्रचण्ड र ओली सर्वशक्तिमान छन् यिनीहरुको मिलेमतोमा भएको कुरा कुनैले पनि का’ट्न ड’राउँछन् तर तुम्बाहाङ्फेको यो साहसलाई मान्नुपर्छ । “जे सुकै गर, महाअ’भियोग लगाएपनि लगाउ तर म, राजिनामा दिन्न”।
यो नेतृत्वलाई गतिलो झा’पड पनि हो । पार्टि सबैको हो तर जहिले पनि अध्यक्षले मात्रै मनोमानी गर्न पाउने व्यवस्था भएको नेकपालाई अब जुनसुकै कदम लिँदापनि दुईपटक सोच्नै पर्ने बनाएको छ ।
पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहको जन्म १ अक्टोबर, १९७६मा भारतको राजस्थान सिकरमा भएको हो । हिमानी भारतको राजस्थानको सिकरका पूर्व सूर्यबंशी राजकूलका राजा बिक्रम सिंह र रानी बिपुला सिंहको कोखबाट जन्नम लिएकी हुन् । हिमानीको सन् २००० मा पूर्वयुवराज पारससँग बिहे भएको थियो । उनले छोरा हृदयेन्द्र शाह, र छोरीहरू पूर्णिका शाह, एवं कृतिका शाहलाई जन्न दिएकी हुन् ।
‘जसले जे सुकै भनोस्, म खुला मान्छे हुँ र त्यही चाहन्छु’ पारसले भने,‘लुकाउन के जरुरी छ र !’ पासरले अहिले आफू अध्ययनमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् । पूर्वीय दर्शनको अध्ययनमा आफू लागेको पारसको भनाइ छ । ‘म अहिले पूर्वीय दर्शनको अध्ययनमा छु’ पारसले भने,‘म हिजाको जस्तो होइन, अब कुनै गल्ती हुँदैन ।
बि’हे गर्छु भ’न्दै पाच दिन सम्म इ’ज्जत लु’टेर, २ लाख रुपैयाँ…
डाक्टर, नर्स सहित एकै अस्पतालका १६ जनामा को’रोना पुष्टि
ऋणले कहिलै पिछा छो’ड्दैन् ? यी उपायबाट पाउनुहुनेछ छुटकारा
यिनै हुन् अ’भागी राधा को’रोना बाट बच्न नेपाल आईन तर क्वारेन्टिनमा यसरी…